सुवर्ण शमशेर आश्चर्यचकित भएछन् र भनेछन्, ‘बस् २५–३० लाख रुपैयाँ । त्यतिले पनि कहाँ क्रान्ति हुन्छ ? नचाहिने कुरा । विना संकोच, दिल खोलेर भन्नोस्, कोइरालाजी । २५–३० लाख भए पुग्छ भन्नुहुन्छ भने ल अहिले नै लिनोस्, १ करोड तपाईहरूलाई ।
बौद्ध गुम्बाको नजिकै गान्धीको सावरमती आश्रमजस्तो एकजना गृहस्थीको थलो छ । परिवार बस्ने सानो घर, एकाध साना टहरा अनि एउटा घर सदृश नेपाली शैलीको माटोका भित्ता र परिवेश भएको उपघर छ । त्यो कलाकार मनुजबाबु मिश्रको थलो हो ।
‘साँच्चै तपाईं कति सुन्दर ?’ ‘अनि बिहे किन नगर्नुभएको ?’ ‘तपाईं भौतिकशास्त्रलाई मान्ने मान्छे, शरीरको आवश्यकता त पूरा गर्नुपर्छ होला नि ?’ ‘हामी हुँदाहुँदै उमेरमै जोगी हुने कुराचाहिँ नगर्नु है ।’ साँच्चै तपार्इंलाई भगवानले फुर्सदमै बनाएका हुन् के ।’
देशका अत्यन्तै सम्मानित कलाकार मनुजबाबु मिश्रको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यतिखेर ९१ वर्षका प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार प्रा. गोविन्दनारायण ज्यापु, ८१ वर्षीय प्रसिद्ध कलाकार हरिप्रसाद शर्मा, मूर्धन्य कलाकार शशीविक्रम शाह, आधुनिक कलाकार गेहेन्द्रमान अमात्य लगायत धेरै कलाकार, साहित्यकार, सञ्चारकर्मी र विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरू तथा मनुजबाबु मिश्रका छोरा रविन्द्र मिश्र (अध्यक्ष विवेकशील पार्टी), रोशन मिश्र, डा. मञ्जु मिश्र (छोरी), माइलो भाइ मोहन मिश्र लगायत आफन्तजनहरू वरिपरि उपस्थित भएका छन् ।
कुनै एक समय थियो, हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा ‘तीजको रहर आयो बरिलै’ बोलको गीत सबैतिर गुञ्जने गथ्र्यो । यही गीत रेडियोबाट बजेपछि गाउँघरमा तीज नजिकिएको महसुस गर्थे, दिदी–बहिनीहरूले । चलचित्र कन्यादानका लागि तयार पारिएको यो गीत निकै लोकप्रिय पनि बन्यो ।
"पिसिओमा फोन आउँछ, दस मिनेटमा पुग्नु ।" स्कुलको पाले दाईले हातमा थमाई दिएको चिट पढ्दै कक्षामा बिज्ञान पढाई रहेका सरले मेरो नाम लिए । त्यो समय २०५७ साल थियो र म कक्षा नौ को विद्यार्थी थिएँ ।
राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईमा १२ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो ।
विनिमय बजार विस्तारका आधार
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालननिम्ति पाँचवटा संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित मल्टी डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी फ्युचर्स, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ, नेपाल कमोडिटी र नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेडले दिएका निवेदनमाथि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ ।